トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Sida loo helo dukaamo fiican in ay qaataan ka qowladda pachinko ka faa'iidaystaan ??magazine e-mail ah
Qof kasta oo ka tii pachinko, warbixin ganacsi oo ka mid ah dhacdooyinka iyo maalinta, waxaan u maleynayaa in dadka qaar ayaa helay boostada. Sababtoo ah maalin walba gaaraan emails wax, Waxaan maqley in dad badan oo aan aad si taxadir leh u eeg. Si kastaba ha ahaatee, haddii xanuunka qaadato mail ah, macluumaadka la doonayo lama haayo gacanta waa khasaare.
Sidaa darteed, waxaan ku bilaabi hab isticmaalka wanaagsan ee mail bixinta. mail The ganacsiga ee tii pachinko, waxaad u timid saaran in ay gelinayaan warbixinta dhacdada iyo macluumaadka Xintai ee maalintii, ama ciidanka. E-mail, xitaa iyada oo aan si qowladda pachinko a socday, hab by kaas oo helay macluumaad ah ee dukaanka.
habka isticmaalka saanac ah e-mail sida, akhri dhiirogelin in ay ka soo baxo mail ah, waxaa in la fuliyay dukaamada si ay u doortaan si hufan marka la barbar dhigo dukaamada kale. First of dhan, inta ku jirta warbixin ay dhacdo, haddii ay dhacdo in qasbi on yahay, aad malayn karaa by model dhacdo oo uu soo dhigay.
tusaale ahaan, had iyo jeer haddii aad model ma aad u badan ordaya in lagu daydo dhacdo ah, waxay kordhisaa suurtagalnimada of Gase loogu talagalay qaliinka. In the case of dhacdooyinka saaray in dadaalka, model iyo calaamooyin model ah oo la xoojiyo, ama keenay model ay dhacdo, waxaa jira u janjeera in ay isku dayaan in ay racfaan ka heshay ah.
dhiiriyo xaalad dhacdooyinka sida, iyo isku dayaan in ay in ay ka mail akhriday, eg ma aha lagama maarmaan si ay u tagaan baabba 'dhacdo, waxa aanu u leeyihiin in ay maalgashi ku xadgudba. Intaa waxaa dheer, dhowr maalmood ka hor ay dhacdo weyn, taariikh dambe lagu qabtay xafladaha, waxaa jira mid mail ee content ugu weyn ee loo soo diray.
sida e-mail, sababtoo ah waa nidaamka dib u soo kabashada iyadoo la raacayo dhacdo, waa in uu jiro daydo ma ujeedadoodu tahay ee ku filan si ay u dhigay on maalinta ganacsi e-mail. A dhowr maalmood ka hor ku dhawaaqay dhacdo ayaa loo tiriyaa inta badan, waxay inoo sheegaysaa inay ammaan wanaagsan in aan si ay u tagaan shaqo joojin.
Oo, waxaan u malaynayaa in mararka qaar ay jirto in mail waxaa loo dhiibaa lagu daro waqtiga caadiga ah.
mail aan joogto ahayn noocan oo kale ah,-set sare oo aan ogeysiis hore Ama sameeyey bandhigga ah madal, ama ku dhawaaqay miiska ciddiyaha macaan, tan iyo inta badan macluumaadka ujeedada, waa ka fiican si loo hubiyo in si loo hubiyo, waxaan u malaynayaa in wax wanaagsan.
Si kastaba ha ahaatee, ka barta of view of xaaladda hadda kicin maanka khamaarka, si aan u dhinta shaqsi dhawaaqo Dejinta si dhihi karaa ogeysiis ah in, waa sida ay fog laga fili karo, waa ilaa dukaanka. Xubnaha e-mail, waxaa jira dad badan Haddii aad ka soo wacayso warbixin aad u fiican sidii hore ka badan macaamiisha kale.
Xintai ee bakhtiyaanasiibka iyo bakhtiyaanasiibka ah farqiga u dhexeeya saacadaha u furan, adiga ama ha i garan hor u leedahay waqti aad u la daabicin. Sidaas darteed, xitaa haddii ay dhacdo in lagu dhuftay dukaamada kale, waa turjumaad ama dhufan mawqif wanaagsan u tahay xaaladaha dheeraad ah. From
tii pachinko kala duwan, qaar ka mid ah kuwa helay e-mail, dadka qaar ka mid ah dukaamada kala duwan in ay leeyihiin by waqtiga. Waxaa loo dhiibi in waqtiga dhabta ah, sida e-mail warbixinta xaaladda, waxaan u malaynayaa in si farsamo waxa la odhan karaa in dadka dagaal ah oo ay awoodaan in ay ka faa'iidaystaan.
sida, si fiican u isticmaalka macluumaadka door helay, marka loo eego kala duwan tii pachinko, waxaan u maleynayaa in ay isku dayi karaan in ay hoos tagaan dukaamada in ujeedadoodu tahay waqti ka waqti.